၁၅.၉.၂၀၁၂ စနေည ပွဲစဉ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၁၅.၉.၂၀၁၂ စနေည ပွဲစဉ်များ
၁၅.၉.၂၀၁၂ စနေည ပွဲစဉ်များ
Posted by မောင် ပေ on Sep 15, 2012 in Creative Writing, Hobbies & Games | 14 comments
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ၂၀၁၄ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲများကြောင့် ၊ ရပ်နားခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ၊ ဂျာမနီ ဘွန်ဒက်လီဂါ ၊ အီတလီ စီးရီးအေ နဲ့ စပိန်လာလီဂါ ပွဲစဉ်များ ပြန်လာပါပြီ
15.9.2012 စနေည ပွဲစဉ်များနဲ့ ပွဲချိန်များကတော့
6.15 နော့ဝစ်(၁၅) – ဝက်ဟမ်း(၇)
8.30 အာဆင်နယ်(၈) – ဆောက်သင်ပတန်(၂၀)
8.30 အက်စတွန်ဗီလာ(၁၇) – ဆွမ်စီး(၂)
8.30 ဖူဟမ်(၁၁) – ဝက်ဘရွန်း(၃)
8.30 မန်ယူ(၅) – ဝီဂန်(၉)
8.30 ကျူပီအာ(၁၉) – ချဲဆီး(၁)
8.30 စတုတ်စီးတီး(၁၂) – မန်စီးတီး(၄)
11.00 ဆန်းဒါးလန်း(၁၃) – လီဗာပူး(၁၈)
ဘွန်ဒက်လီဂါ ပွဲစဉ် (၃)
8.00 ဒေါ့မန်(၆) – လေဗာကူဆင်(၁၀)
8.00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ်(၁) – မိန့် ဇ်(၁၃)
8.00 ဂလာဘတ်(၈) – နုရင်ဘတ်(၇)
8.00 စတုဂတ်(၁၈) – ဒူဆယ်ဒေါ့ဖ်(၅)
8.00 ဟန်နိုဗာ(၃) – ဝါဒါဘရီမင်(၁၁)
11.00 ဂရုသာဖတ်(၁၂) – ရှော်ကေး(၄)
စီးရီးအေ ပွဲစဉ် (၃)
10.30 ပါလာမို(၁၇) – ကယ်ဂလီယာရီ(၁၄)
1.15 အေစီမီလန်(၁၀) – အက်တလန်တာ(၁၉)
လာလီဂါ ပွဲစဉ် (၄)
8.30 မာလာဂါ(၃) – လီဗန်တေး(၁၁)
10.30 ဗလင်စီယာ(၁၇) – ဆဲတာဗီဂို(၁၃)
12.30 ဂီတာဖေး(၁၀) – ဘာစီလိုနာ(၁)
2.30 ဆီဗီလာ(၇) – ရီးရဲမက်ဒရစ်(၉)
စတုတ်(၁၂) – မန်စီးတီး(၄)
စတုတ် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်၃အပြီး ၀ နိုင် ၃ သရေ ၀ ရှုံး ရဂိုး ၃ ပေးဂိုး ၃ ရမှတ် ၃
မန်စီးတီး ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်၃အပြီး ၂ နိုင် ၁ သရေ ၀ ရှုံး ရဂိုး ၈ ပေးဂိုး ၅ ရမှတ် ၇
စတုတ်ကစားခဲ့သော ရှေ့ သုံးပွဲမှာ
1.9.2012 ဝီဂန် ၂-၂ စတုတ်
28.8.2012 စတုတ် ၃-၄ ဆွင်ဒမ်း (ကာလင်းဖလား)
26.8.2012 စတုတ် ၀-၀ အာဆင်နယ်
မန်စီးတီး ကစားခဲ့သော ရှေ့ သုံးပွဲမှာ
1.9.2012 မန်စီးတီး ၃-၁ ကျူပီအာ
စတုတ် ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Wilkinson, Huth, Shawcross, Cameron
လယ် Pennant, N’Zonzi, Adam, Kightly
ရှေ့Crouch, Owen
နောက် Maicon, Kompany, Lescott, Kolarov
လယ် Yaya Toure, Garcia
လယ် Nasri, Silva
ရှေ့Tevez, Dzeko
စတုတ် နဲ့ မန်စီးတီး တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
24.3.2012 စတုတ် ၁-၁ မန်စီးတီး
21.12.2011 မန်စီးတီး ၃-၀ စတုတ်
17.5.2011 မန်စီးတီး ၃-၀ စတုတ်
27.11.2010 စတုတ် ၁-၁ မန်စီးတီး
မန်စီးတီး အသင်းဟာ စတုတ်စီးတီးရဲ့ အိမ်ကွင်း “Britannia Stadium” မှာ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ငါးကြိမ်မှာ တစ်ပွဲမှာ အနိုင်မရခဲ့ပါဘူး ။
စတုတ် ဟာ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားအမှတ်ပေးပွဲ ၁၄ ပွဲမှာ ၁ ပွဲ ပဲ အနိုင် ရခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ပွဲစဉ် ၁၁ ပွဲကိုပါ ထည့်တွက်ထားတာပါ ။
စတုတ် ကို နောက်ဆုံးရောက်လာခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး အိုဝင် ကတော့ ကြံ့ ခိုင်မှု ပြည့်ဝနေပြီ လို့ ဆိုပါတယ် ။
ဈေးအနေအထားအရ အာရှဘက်မှာ မန်စီးတီး တစ်ဂိုးသွင်းရင် ၅၀ အနိုင် ကို သည်မှာ မန်စီးတီး တစ်ဂိုး၄၀ အနိုင်ပဲဖွင့်လာပါတယ် ။
သည်ဈေးအတိုင်းသာ ညအထိ မပြောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ၊ မန်စီးတီးကို အားပေးရင် တစ်ဝက်နဲ့ အပြည့် တစ်ခုခုပါပဲ ။
ကျူပီအာ (၁၉) – ချဲဆီး (၁)
ကျူပီအာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်၃အပြီးမှာ ၀ နိုင် ၁ သရေ ၂ ရှုံး ရဂိုး ၂ ပေးဂိုး ၉ ရမှတ် ၁
ချဲဆီး ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်၃အပြီးမှာ ၃ နိုင် ၀ သရေ ၀ ရှုံး ရဂိုး ၈ ပေးဂိုး ၂ ရမှတ် ၉
ကျူပီအာ ကစားခဲ့တဲ့ ရှေ့ သုံးပွဲမှာ
19.2012 မန်စီးတီး ၃-၁ ကျူပီအာ
28.8.2012 ကျူပီအာ ၃-၀ ဝါဆော
25.8.2012 နော့ဝစ် ၁-၁ ကျူပီအာ ( ကာလင်းဖလား )
ချဲဆီး ကစားခဲ့တဲ့ ရှေ့ သုံးပွဲမှာ
31.8.2012 ချဲဆီး ၁-၄ အသလက်တီကို ( စူပါကပ် )
25.8.2012 ချဲဆီး ၂-၀ နယူးကာဆယ်
22.8.2012 ချဲဆီး ၄-၂ ရီဒင်း
နောက် Bosingwa, Ferdinand, Onouha, Fabio
လယ် Wright-Phillips, Granero, Faurlin, Park
ရှေ့Zamora, Johnson
ချဲဆီး ရဲ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
လယ် Lampard, Mikel
လယ် Ramires, Mata, Hazard
ကျူပီအာ နဲ့ ချဲဆီး တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
၂၉.၄.၂၀၁၂ ချဲဆီး ၆-၁ ကျူပီအာ
၂၈.၁.၂၀၁၂ ကျူပီအာ ၀-၁ ချဲဆီး ( အက်ဖ်အေ )
၂၃.၁၀.၂၀၁၁ ကျူပီအာ ၁-၀ ချဲဆီး
၂၃.၉.၂၀၀၉ ချဲဆီး ၁-၀ ကျူပီအာ ( ကာလင်း )
ကျူပီအာ အသင်းဟာ ကစားသမားကောင်းများအားဖြည့်ထားသော်လည်း အခုထိနိုင်ပွဲမရသေးပါဘူး
ကျူပီအာ အသင်းမှာ ဒဏ်ရာရ ကစားသမား ကင်းစင်နေပါတယ်
ချဲဆီးမှာတော့ ဂျွန်တယ်ရီ နဲ့ အက်ရှလေကိုး တို့ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမှာ ဒဏ်ရာရခဲ့လို့ မပါဖို့ များပါတယ်
နောက်ပြီး လာမယ့် အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးညမှာ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုပွဲစဉ်၁ ကို ဂျူဗင်တပ် နဲ့ ကစားရမှာမို့ ၊ ဒီပွဲကို ချိုကစားလာနိုင်ပါတယ် ။
ဈေးအနေအထားအရ အာရှဘက်မှာ ချဲဆီး လယ်ဗယ်ရှုံးဖွင့်ထားတာကို ဒီမှာ ချဲဆီးတစ်ဂိုးသွင်းမှ ၇၀ အနိုင်ဖွင့်လာပါတယ် ။
ချဲဆီး သရေအရှုံးဆိုတဲ့ ဈေးဟာ နုလွန်းပါတယ် ။ ဒီဘက်က ဖွင့်တဲ့ဈေးကြတော့ တစ်ဂိုး၇၀ အနိုင် ဆိုပြန်တော့ ချဲဆီး နေချင်စရာပါပဲ ။
စဉ်းစားစရာတစ်ခုကတော့ ၊ ချဲဆီးဟာ ဒီပွဲမှာ သရေ ကစားရုံနဲ့ အမှတ်ပေးဇယား အဆင့်၁ ကနေ မဆင်းရသေးပါဘူး ။
ချန်ပီယံလိဂ်လဲ ကစားရဦးမှာဆိုတော့ ၊ သည်ပွဲကို လက်ရှောင်ချင်ပြီး ၊ အားပေးရမယ်ဆိုရင်တော့
မန်ယူ (၅) – ဝီဂန် (၉)
နောက် Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra
လယ် Valencia, Carrick, Cleverley, Nani
ရှေ့Hernandez, Welbeck
ဝီဂန် ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Alcaraz, Caldwell, Ramis
လယ် Boyce, McCarthy, McArthur, Figueroa
ရှေ့Kone, Di Santo, Maloney
မန်ယူ နဲ့ ဝီဂန် တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
၁၁.၄.၂၀၁၂ ဝီဂန် ၁-၀ မန်ယူ
၂၆.၁၂.၂၀၁၁ မန်ယူ ၅-၀ ဝီဂန်
၂၆.၂.၂၀၁၁ ဝီဂန် ၀-၄ မန်ယူ
၂၀.၁၁.၂၀၁၀ မန်ယူ ၂-၀ ဝီဂန်
မန်ယူပရိသတ်များအတွက် ပျော်စရာသတင်းတစ်ခုကတော့ ၊ ၁၄ရက်နေ့ မန်ယူဝက်ဆိုက်မှာ ၊ နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်ဟာ ဒီလို ပြောသွားပါတယ်
“ Sir Alex Ferguson confirms Van Persie & Kagawa fit to face Wigan ”
ဈေးအနေအထားအရ အာရှဘက်မှာ မန်ယူ ၂ဂိုးသွင်းရင် ၅၀ အနိုင် ကို မန်ယူ ၂ဂိုးသွင်းရင် ၆၀ အနိုင် ဖွင့်လာပါတယ် ။
အတိတ်က မှတ်တမ်းများကိုကြည့်ရင်လဲ မန်ယူအိမ်ကွင်းဆိုရင် ၂ဂိုးပြတ်နဲ့ နိုင်ခဲ့တာများပါတယ်
ဒါပေမယ့် မန်ယူ ဟာ လာမယ့် အင်္ဂါ/ဗုဒ္ဓဟူး မှာ ချန်ပီယံလိဂ် ကစားရဖို့ ရှိနေတာကို ထည့်တွက်ရင်
““ ဝီဂန် ”” ကို ပဲ အားပေးပါမယ် ။ ၁-၀/၂-၁ လောက်နဲ့ ပဲနိုင်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဆန်းဒါးလန်း (၁၃) – လီဗာပူး (၁၈)
ဆန်းဒါးလန်း ပရီးမီးယားလိဂ် ၂ပွဲကန်အပြီး ၀ နိုင် ၂ သရေ ၀ ရှုံး ရဂိုး၂ ပေးဂိုး၂ ရမှတ် ၂
လီဗာပူး ပရီးမီးယားလိဂ် ၃ပွဲကန်အပြီး ၀ နိုင် ၁ သရေ ၂ ရှုံး ရဂိုး၂ ပေးဂိုး၇ ရမှတ် ၁
ဆန်းဒါးလန်း ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Gardner, O’Shea, Cuellar, Rose
လယ် Larsson, Sessegnon, Cattermole, A.Johnson
ရှေ့Saha, Fletcher
လီဗာပူး ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် G. Johnson, Agger, Skrtel, Enrique
လယ် Gerrard, Allen, Sahin
ရှေ့Downing, Suarez, Sterling
ဆန်းဒါးလန်း နဲ့ လီဗာပူး တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
10.3.2012 ဆန်းဒါးလန်း ၁-၀ လီဗာပူး
13.8.2011 လီဗာပူး ၁-၁ ဆန်းဒါးလန်း
20.3.2011 ဆန်းဒါးလန်း ၀-၂ လီဗာပူး
25.9.2010 လီဗာပူး ၂-၂ ဆန်းဒါးလန်း
ဈေးအနေအထားအရ အာရှဘက်မှာ လီဗာပူး သရေဆိုရင် ၅၀ အရှုံး ကို သရေ ၇၀အရှုံးဖွင့်လာပါတယ် ။
ဒီဈေးအတိုင်းဆိုရင် ဒိုင်များဟာ ဖိုက်တာများကို ဆန်းဒါးလန်းဘက်ကို အားပေးဖို့ ခေါ်ထားပါပြီ
ဒီနေ့ ညပွဲမှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ နိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှ မရှိသေးတဲ့ ၊ အနိုင်ရအောင် ရုန်းတော့မယ့်
““ လီဗာပူး ”” ကို ခပ်ပါးပါးလေး အားပေးချင်ပါတယ်။
မိုချင်ဂလာဘတ်(၈) – နုရင်ဘတ်(၇)
ဂလာဘတ် ဘွန်ဒက်လီဂါ ၂ပွဲကန်အပြီး ၁ နိုင် ၊ ၁ သရေ ၊ ၀ ရှုံး ၊ ရဂိုး၂ ပေးဂိုး၁ ရမှတ် ၄
နုရင်ဘတ် ဘွန်ဒက်လီဂါ ၂ပွဲကန်အပြီးမှာ ၁ နိုင် ၊ ၁ သရေ ၊ ၀ ရှုံး ၊ ရဂိုး၂ ပေးဂိုး၁ ရမှတ် ၄
မိုချင်ဂလာဘတ် ရှေ့ ကစားခဲ့သော ပွဲများမှာ
1.9.2012 ဒူဆယ်ဒေါ့ဖ် ၀-၀ ဂလာဘတ်
28.8.2012 ဒိုင်နမိုကိဗ် ၁-၂ ဂလာဘတ် (ယူရိုပါလိဂ်)
25.8.2012 ဂလာဘတ် ၂-၁ ဟော့ဖန်ဟိမ်း
နုရင်ဘတ် ရှေ့ ကစားခဲ့သော ပွဲများမှာ
1.9.2012 နုရင်ဘတ် ၁-၁ ဒေါ့မန်
25.8.2012 ဟမ်းဘတ် ၀-၁ နုရင်ဘတ်
ဂလာဘတ် နဲ့ နုရင်ဘတ် တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
4.3.2012 နုရင်ဘတ် ၁-၀ ဂလာဘတ်
24.9.2012 ဂလာဘတ် ၁-၀ နုရင်ဘတ်
15.1.2011 နုရင်ဘတ် ၀-၁ ဂလာဘတ်
ဈေးအနေအထားအရ အာရှဘက်မှာ ဂလာဘတ် သရေ အပြည့်ရှုံး ကို ဂလာဘတ် တစ်ဂိုးသွင်းမှ ၈၀ အနိုင်ပဲ ပေးလာသည်
သည်ပွဲမှာ “““ ဂလာဘတ် ””” ကို အားပေးလျှင် ပျော်ရပါမည်။
မာလာဂါ(၃) – လီဗန်တေး(၁၁)
မာလာဂါ ပွဲစဉ်၃အပြီး ၂ နိုင် ၁ သရေ ၀ ရှုံး ရဂိုး၃ ပေးဂိုး၁ ရမှတ် ၇
လီဗန်တေး ပွဲစဉ်၃အပြီး ၁ နိုင် ၁ သရေ ၁ ရှုံး ရဂိုး ၄ ပေးဂိုး ၅ ရမှတ် ၄
မာလာဂါ ကန်ခဲ့သော ရှေ့ ပွဲများမှာ
1.9.2012 ဇာရာဂိုဇာ ၀-၁ မာလာဂါ
28.8.2012 ပါနာသီနာကို့ဝ-၀ မာလာဂါ ( ချန်ပီယံလိဂ်ခြေစစ်ပွဲ )
25.8.2012 မာလာဂါ ၁-၁ မာယော့ကာ
22.8.2012 မာလာဂါ ၂-၀ ပါနာသီနာကို့( ချန်ပီယံလိဂ်ခြေစစ်ပွဲ )
လီဗန်တေး ကန်ခဲ့သော ရှေ့ ပွဲများမှာ
2.9.2012 လီဗန်တေး ၃-၂ အက်စ်ပန်ညို
30.8.2012 လီဗန်တေး ၁-၀ မားသားဝဲ ( ယူရိုပါလိဂ် )
27.8.2012 ဗယ်လာဒိုလစ် ၂-၀ လီဗန်တေး
23.8.2012 မားသားဝဲ ၀-၂ လီဗန်တေး ( ယူရိုပါလိဂ် )
မာလာဂါ အိမ်ကွင်း လီဗန်တေး နဲ့ တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
10.3.2012 မာလာဂါ ၁-၀ လီဗန်တေး
14.11.2010 မာလာဂါ ၁-၀ လီဗန်တေး
ဈေးအနေအထားအရ အာရှဘက်မှာ မာလာဂါ တစ်ဂိုး ၅၀ အနိုင် ကို တစ်ဂိုး ၃၀ အနိုင်ပဲ ဖွင့်လာသည်။ ဂိုးဈေးကြတော့ နှစ်ဂိုး ၅၀ အရှုံးတဲ့ ။
“““ မာလာဂါ ””” နဲ့ “““ ဂိုးအနဲ ””” ကို တွဲဘက် စားသုံးလျှင် ပြီးပြည့်စုံပါမည်။
ညပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲသော ဈေးများအရ ၊ အားပေးသူများကို လုပ်ကျွေးမည့် ပွဲများကို ကွန်မင့်များဖြင့် ထပ်မံဖော်ပြပါဦးမည်။
……. အားလုံး အောင်မြင် ပျော်ရွှင်ပါစေ …….
ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းလို့ညဉ့် နက်ပွဲတော့လုပ်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး
နော့ ဝစ်ခ်ျ ကိုတော့ ကြိုက်တယ်
ချဲလ်ဆီး ကတော့ (၁) ပေအုံးမပေါ့ …
ဖတ်ရှု့အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ…ဒါပေ့မယ့်ကျနော့်အတွက်တော့ခက်နေပြီ ..အကိုရေ….မန်ယူနဲ့ဝီဂန်ဆို..ဒီမှာက..မန်ယူကနေ $100 လောင်းရင်…$15 စားရမယ်ဗျ..မန်ယူ ဘယ်နှဂိုးနဲ့ နှိုင်နှိုင်ပေါ့….မန်းစီးတီး..ဆိုလည်း..ဘယ်နှဂိုးသွင်းသွင်း…$75တော့စားရမှာပဲ..သရေဆိုရင်တော့ ပလုံစွပ်..ပဲ..ခက်တယ်ဗျာ..ကျနော် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ..မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး..ဂျာနယ်တွေလည်း တစ်စောင်မှ့ဖတ်လို့မရ..(Manchester United 1.53
Wigan Athletic 16.00 )(
Stoke City 5.88
Manchester City 1.75 )
ဒီမှာကော အာရှမှာပါ ဈေးတွေပြောင်းတယ်ဗျို့
၁ မန်စီးတီး ၂ ဆန်းဒါးလန်း ၃ ဂီတာဖေး
ကျုပ်ကတော့ အဲဒီသုံးသင်းကို မိန်း လုပ်စေချင်ပါတယ်။ သဘောကျရင်ပေါ့
မန်စီးတီးနဲ့ ချယ်လ်ဆီး ဘက်က
ချပြီ အကိုေ၇…..အဲ့ဒီ ၃ သင်းဆို…သူတို့က ဒီလိုပေးသဗျ….မန်စီးတီး..၁.၇၅x..(အမြှောက်အက္ခရာပါ)..ဆန်းဒါးလန်းဆို..၂.၅၅.x…ဂီတာဖေးဆို..၅.၆….၃..သင်းပေါင်း..မြျှောက်လိုက်ရင်..၁.၇၅x၂.၅၅x၅.၆=၂၄.၉၉..ရပါတယ်..၃..သင်းလုံး..သရေမကျပဲ….အနှိုင်ပြတ်သားရင်ပေါ့ဗျာ…$100 လောင်းရင်..$2499 ရသပေါ့ဗျာ….ဒါပေ့မယ့် ဘာစီက ဂီတာဖေးကို သရေပဲကျ…..ပလုံစွပ်ပဲ…၁၀၀..
ကျွန်တော် ပြောချင်တာက “ဂီတာဖေး” ကို ချရမှာလေဗျ
အက်စတွန်ဗီလာ(၁၇) – ဆွမ်စီး(၂)
ဗီလာ ပရီးမီးယား၃ပွဲကန်အပြီး ၀ နိုင် ၊ ၁ သရေ ၊ ၂ ရှုံး ၊ ရဂိုး၂ ပေးဂိုး၅ ရမှတ် ၁
ဆွမ်စီး ပရီးမီးယား၃ပွဲကန်အပြီး ၂ နိုင် ၊ ၁ သရေ ၊ ၀ ရှုံး ၊ ရဂိုး၁၀ ပေးဂိုး၂ ရမှတ် ၇
( ဆွမ်စီးသည် လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ်တွင် သွင်းဂိုးအများဆုံးဖြစ်နေ )
ဗီလာရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Lichaj, Vlaar, Clark, Bennett
လယ် Holman, Ireland, Westwood, N’Zogbia
ဆွမ်စီး ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Angel Rangel, Tate, Williams, Davies
လယ် Britton, De Guzman
ရှေ့Michu
ရှေ့Routledge, Graham, Dyer
ဗီလာ နဲ့ ဆွမ်စီး တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
2.1.2012 ဗီလာ ၀-၂ ဆွမ်စီး
27.11.2012 ဆွမ်စီး ၁-၁ ဗီလာ
ဈေးအနေအထားအရ အာရှဘက်မှာ အက်စတွန်ဗီလာ သရေ ၅၀ အရှုံး ကို သရေ ၅၀ အရှုံး ပဲ ဖွင့်လာသည် ။ ဂိုးဈေးမှာ ၂ ဂိုးဆိုလျှင် အပြည့်ရှုံး ကို ၂ ဂိုး ၉၀ အရှုံး ဖွင့်လာသည် ။
ဒီရာသီ ဆွမ်စီးရဲ့ ခြေစွမ်းကတော့ အရမ်းကောင်းနေခဲ့တာ ရပ်ချိန်တန်လောက်ပြီလို့ ယူဆမိသည် ။
ဒီရာသီ နိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှ မရှိသေးသော အက်စတွန်ဗီလာ ၏ ရုန်းအားကို ပြီးခဲ့သော နယူးကာဆယ် အိမ်ကွင်းတွင် နယူးကာဆယ်နှင့် ကစားခဲ့သော ပွဲတွင် တွေ့ ခဲ့ရသည် ။ ၁-၀ ဖြင့် အရင်ဦးဆောင်ပြီးမှ ချေပဂိုးပြန်ပေးခဲ့ရသဖြင့် ၁-၁ သရေကျခဲ့သည်။
သည်ပွဲမှာတော့ အက်စတွန်ဗီလာ အိမ်ကွင်းအားသာချက် ၊ အိမ်ကွင်းပရိသတ်များရှေ့ တွင် နိုင်ပွဲသေချာပေါက် ရရန် အားတင် ကစားလာမည်မှာ သေချာပါသည် ။
၅၀ နဲ့ အပြည့် လဲရမည့်သဘော
““““ အက်စတွန်ဗီလာ ”””” နှင့် ““ ဂိုးအနဲ ခပ်ပါးပါး ”” အားပေးလျှင် ၂သီးစားရမှာ ၇၀% ရှိပါသည်။
ကံကောင်းပါစေ ကိုပေ နဲ့ ရောင်းရင်းများ
ကျနော်ကတော့ လူမိုက်နဲ့ငွေ အတူမနေမို့
အကိုင်းမြင့်မြင့်မှာ နားနေရပေမဲ့ ဝါသနာတူများကို ကံကောင်းခြင်းဆုလာဒ်ရစေချင်။
မန်ချက်နဲ့ မန်စီးတီး၂ဂိုးစီ အသာဖြင့်နိုင်မည်။
မန်ယူနဲ့ ပြန်ယူမည် ….
မဆီမဆိုင်နဲ့ အကြံပေးချင်တာကတော့ ရိုးမား နဲ့ ဘိုလော့ဂ်နာ ပွဲမှာ ဂိုးပေါင်းအပေါ်ဗျ
ဘာဖြစ်လို့ ဂိုးပေါင်းအပေါကို ပြောရလဲဆိုရင် ရိုးမား ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ စီရီးအေ နှစ်ပွဲနဲ ဘိုလော့နာရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲဟာ ဂိုးပေါင်းလေးဂိုးစီရှီခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ ဒါကအကြမ်းဖျင်းသုံးသပ်ချက်ပါ။
အဓီကကျတာကတော့ ဘာစီ၊ ရီယဲလ်၊ မန်ယူ ၊ ချဲလ်ဆီ ၊ စီရီးအေမှာဆိုရင်တော့ အေစီလောက်သာမကောင်းတတ်လို့ထည့်ရမယ် ဒီအသင်းတွေမှ မဟုတ်ရင် ဂိုးပေါင်း 3-40 ဆိုတဲ့ အာရှဈေးဖွင့်လှစ်မှုဟာ ရိုးမာအတွက် အနူလက်နဲ့ရွှေခွက်နှိုက်ရာကျမနေလွန်းဘူးလားဗျာ။ ဒါပေမယ့်ဈေးဖွင့်လှစ်သူများအနေနဲ့ကတော့ လူပိန်းမှမဟုတ်တာဘဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့မထင်နဲ့ဗျ ပိုက်ဆံရချင်ရင် ဒီပွဲကိုဂိုးပေါ်လောင်းဖြစ်အောင်လောင်း ဂိုးပေါင်း ၄လုံး ၅ လုံးလောက်ရောက်မှာ။
အနိမ့်ဆုံးအာမခံနိုင်တာကတော့ ၃ လုံးဗျာ။ မြန်မာဈေးဖွင့်လှစ်မှုမှာတော့ ဒီဈေးဟာနဲနဲ များနေတဲ့အတွက်
3-10 လောက်ပဲထွက်လာလောက်တယ်။ ၁၀ ၂၀ ရှုံးနဲ့အပြည့်ဒါမှမလဲရဲလို့ကတော့ ပွေးဝဲသာစွဲးသေလိုက်တော့ဗျား
မှတ်ချက်။ ။ ရိုက်တိုင်းရှုံးမောင်